Nzira yekuita rhyme "kunzwa kwekuve wega" ne "kure basa"?
Nzira yekuita rwiyo "kunzwa kwekuve wega" ne "basa rekure"?
Yakatumirwa ne Tranquillus | Dec 15, 2020 | Pamusoro pewebhu
Ndeipi kunzwa kwekuve wega?
Kunzwa kuve wega ndechimwe chezvinhu zvakakosha zvinotsanangurwa nepiramidhi yakakurumbira yeMaslow muna 1943. Munyori wayo, chiremba wepfungwa Abraham Maslow, akabatanidza kudiwa kwekuva nezvido zverudo, hushamwari nekubatana. Aya ndiwo manzwiro akasimba anotendera munhu kukura mukati meboka, chero zvazvingava. Munyika yehunyanzvi, izvi zvinoshandura mukudyidzana, nekutevedzera kwevashandi kune tsika yemubatanidzwa, pamwe nekunzwa kwekubatsira mukuzadzikiswa kwechinangwa chakafanana. Kunzwa kwekuve wega kunogadzirwa uye kuchengetedzwa mukambani. Inogadzira - pakati pezvimwe zvinhu - nekugovana chinangwa chakajairika, asiwo nenguva dzehukama, mimwe misangano yehunyanzvi, mashandiro ekuvaka timu, nezvimwe.
Nzira yekuita rwiyo "kunzwa kwekuve wega" ne "basa rekure"? Zvita 17th, 2020Tranquillus
VERENGA Target, svika uye shandura yako yakajairwa mutengi
pashureTeleworking: unogona here kuongorora zvinoitwa nevashandi vako?
zvinoteveraKuedza: kumeso kwakavanzika kwekufona
Rako Bhizinesi pane otomatiki Piloting neCLICKFUNNELS
Misoro yekutsvakurudza, mabasa ekutsvakurudza